Ekwela ka Bots na-ekwu maka ụdị gị! | Martech Zone
Ekwela ka Bots na-ekwu maka ụdị gị!
Fraịdee, June 1, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Tara Kelly
Alexa, olu nke nyeere aka nke onwe nke Amazon, nwere ike ịkwọ ụgbọala karịa $ 10 enweta ego n'ime nanị afọ ole na ole. Na mbido Jenụwarị, Google kwuru na ọ rere karịa 6 nde Ngwaọrụ Google Home kemgbe etiti Ọktọba. Enyemaka bots dị ka Alexa na Hey Google na-aghọ ihe dị mkpa nke ndụ nke oge a, nke ahụ na-enyekwa ohere dị ịtụnanya maka ụdị iji jikọta ndị ahịa na ikpo okwu ọhụrụ.
N'ịchọ ịnakwere ohere ahụ, ụdị na-agba ọsọ itinye ọdịnaya ha na nyiwe olu na-achọ olu. Ọ dị mma maka ha - ịbanye n'ala ụlọ na nyiwe olu na-enye ọtụtụ echiche, dịka ịmepụta weebụsaịtị wepụtara na 1995. Ma na ọsọ ha, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahapụ olu akara ha (yana data metụtara data) n'aka bot nke atọ.
Nke ahụ nwere ike ịbụ nnukwu mbibi. Cheedị ịntanetị ebe ebe nrụọrụ weebụ niile dị oji na ọcha, tọgbọ na otu kọlụm na saịtị niile na-eji otu font. Ọ dịghị ihe ga-apụ apụ. Enweghị saịtị ọ bụla ga-egosipụta ọdịdị na mmetụta nke ụdị ndị ha na-anọchi anya ya, yabụ ndị ahịa ga-enweta ahụmịhe na-ekwekọghị ekwekọ mgbe ha na ndị ahịa na-akpakọrịta na nyiwe ndị ọzọ. Ọ ga-abụ ọdachi si a branding n'ọnọdụ, nri?
Ihe dị ka nke ahụ na-eme mgbe ụlọ ọrụ na-agbakọta ọnụ maka ngwa maka enyemaka ndị na-enyere aka na-enweghị ike ịmepụta na ichebe ụdị akara ngosi pụrụ iche. Dika odi, o ghaghi adi otua. Kama inye ndị na-enyere bots aka ịchịkwa olu akara gị, ị nwere ike ịmepụta nke gị, atụmatụ nkwukọrịta AI nke nwere ngwa emere maka nkwukọrịta olu-ikpo okwu.
Ikwesighi iwuli ngwanrọ olu site na ala iji mee ka o mee - enwere ikike nke API, ihe mkparita uka nke a na-eme ugbu a ka ị gwa ndi ahia okwu ebe obula ha no - na ekwenti, na ndi ozo windo nkata ma ọ bụ n'ụlọ ha site na enyemaka bots. Site n'ụzọ ziri ezi, ịnwere ike ijide n'aka na mkparịta ụka ndị a na-agbanwe agbanwe na oge niile.
Ndị na-ere ahịa na-eduzi ugbu a na-eji usoro a iji dozie mkparịta ụka na ndị ahịa site na enyemaka bots, na-enye azịza nye ajụjụ ndị ahịa banyere nnweta ngwaahịa ma ọ bụ nnyefe. Companieslọ ọrụ ịnshọransị na-eji olu ịza ajụjụ banyere uru mgbazinye ụgbọ ala ka a na-arụzi ụgbọ ala ndị ahịa. Lọ akụ na-eji nyiwe olu iji melite ma gbanwee akara aka na ndị ahịa.
Site na ngwọta olu ziri ezi na ozi ọhụụ, ị nwere ike ijide n'aka na etinye data ndị ahịa n'ụzọ ziri ezi iji mepụta njikọ na ndị ahịa. Ma mgbe ị na-achịkwa olu nke akara gị na nyiwe enyemaka AI, ị ga-enwe ike iwekọta data sitere na azụmahịa olu n'ime usoro CRM nke ụlọ ọrụ gị. Nke ahụ ga-adịwanye mkpa ka ndị ahịa na-eme nyocha site na olu.
Onye nyocha banyere ụlọ ọrụ Independent Gartner buru amụma na 30 percent nke nchọgharị ga-eme na-enweghị enyo mgbe 2020, dị ka olu-mbụ nchọgharị site na ngwaọrụ dị ka ekwentị na Ai na-enyere aka enweta ala na ederede dabeere na ọchụchọ. Yourlọ ọrụ gị ọ ga - enwe ike iwepụ data ahụ - ma ọ bụ kwe ka ọ bụrụ onye ọzọ na - achịkwa bot? Site n'iji ikike olu gị na-achịkwa nke ọma, ị nwekwara ike ijikwa data gị.
Dika ndi na-enyere olu aka na-eme karia ndi ozo n'etiti ndi ahia na ndi ahia, ihe egwu nye ndi ulo oru ndi na-etinye olu ha na ndi ozo. A na-agbanwe uru bara uru mgbe olu anaghị agbanwe agbanwe gafee ọwa, ntụkwasị obi ndị ahịa na-ebelata. Ọnwụ data pụtara na ụdị enweghị ike ịmepụta profaịlụ ndị ahịa zuru oke.
Ndị isi ụlọ ọrụ na-elekwasị anya n'ọdịnihu na-aghọta nsogbu ahụ, ọ bụ ya mere ha ji agba ọsọ iji mepụta ọnụnọ ikpo okwu olu. Ọchịchọ ha ịnakwere nyiwe ndị a nwere ezi uche. Mana ọ dị mkpa ịmepụta atụmatụ na-echebe iguzosi ike n'ezi ihe nke ika ahụ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-ezube iso ndị ahịa kparịta ụka site na enyemaka ndị na-enyere ha aka, gbaa mbọ hụ na ịghara ikwe ka ndị bọọ na-ekwuchitere gị.
Tags: alexabotsika ikambọnolu
A serial innovator, bipụtara na-ede akwụkwọ na nchoputa, president na CEO nke Ngwa SPLICE, Tara nwere mmasị na nkà na ụzụ nwere ike ịgbanwe ndụ maka mma. Ọ na-eme ka nkwenkwe ahụ na-aga n'ihu na teknụzụ na-emepe emepe nke na-eme ka ọrụ dịkwuo mma, na-eme ka ọrụ dịkwuo mma, ma melite ahụmịhe ndị ahịa. Nke a emeela ka ụlọ ọrụ ahụmịhe ndị ahịa atọ mepụta ma gbanwee echiche dị iche iche na patent, teknụzụ ikike nke na-ejikọ iyi data iji mepụta ozi nke ahaziri onwe ya.
Uru 4 nke Micro-Influencers